Karatra hankalazana ny fetin'ny ray | Asa tanana
Marian monleon | | asa-tanana, Asa-tanana ho an'ny Fetin'ny ray
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny tsikelikely amin'ny karatra hankalazana ny fetin'ny ray. Mbola kely sisa no sisa tavela hatramin'ny 19 Febroary, izany hoe Fetin'ny ray. Amin'ity karatra ity dia azonao atao ny miarahaba an'i dada izay ao an-trano sy izay mendrika ny zava-drehetra.
Maty ny zoro.
Fomba hanamboarana ilay karatra:
Tapaho roa amin'ny endriny longitudinal dia karatra DinA4. Aforeto amin'ny antsasany, araka ny hita eo amin'ny sary.
marca miaraka amin'ny fanampian'ny mpanapaka sy pensilihazo eo anilan'ny roa sosona telo santimetatra amin'ny lafiny roa amin'ny sisiny, iray mifanitsy aminy santimetatra roa sy sasany amin'ity lafiny ity ary marika iray hafa mankany roa santimetatra lavitra ny sisiny.
Manaova fanapahana voalohany amin'ny parallel mandra-pahatongan'ny marika roa santimetatra. Raiso ny tapany roa amin'ny baoritra.
Sokafy izao ny baoritra ary tapahina amin'ny lafiny iray manomboka amin'ny roa santimetatra ka hatramin'ny telo ao amin'ny faritra roa. Noho izany dia tsy maintsy manana endrika mitovy amin'ilay aseho amin'ny sary ianao.
Miaraka amin'ny maty manodidina ny zorony.
Aforeto ny lapels hanaovana ny vozon'akanjo akanjo.
Hetezo ny volon'ny kofehy amin'ny taratasy voaravaka, alao antoka fa mifanaraka amin'ny lobaka izy, mba ho tsara tarehy.
* Azonao atao ny misintona ny sarin'ny fatorana amin'ny farany, ary alaivo ao ny lamina.
Apetaho ny fatotra amin'ny tranokalanao.
Tohizo ny fametahana ny lapels ny lobaka.
Farany, a sandoka nozairina manodidina ny kaontin'ny karatra. Tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana tsipika rava amin'ny penina.
Azonao atao ny manamboatra ireo fitambarana tadiavinao. Izy ireo dia mety amin'ny fanoratana hafatra. Izy ireo dia afaka miasa manokana ho toy ny mari-pamantarana ho an'ny Fetin'ny ray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » Fotoana manokana » Asa-tanana ho an'ny Fetin'ny ray » Karatra hankalazana ny andron'ny ray